Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 13)
IPhone X iibsadayaashu aad ayey ugu qanacsan yihiin wax walba marka laga reebo Siri
Guud ahaan, dadka isticmaala iPhone X waxay aad ugu qanacsan yihiin iibsashada guud ahaan, xitaa nidaamka Aqoonsiga Aqoonsiga.
Midkoodna Apple ma garanayo waxa ku dhaca Apple Watch ee xanniban oo muujinaya tufaaxa
Markan waxaan aadnay mid ka mid ah Apple Stores-ka ugu astaanta badan Spain oo leh Apple Watch oo laga xannibay sagxadda taas oo aan macquul aheyn in dib loo soo nooleeyo si kasta.
Apple wuxuu xirayaa dukaanka kaliya ee furan ee loogu talagalay Apple Watch
Haddii aadan ogeyn, Apple weli wuxuu lahaa dukaan gaar ah oo furan oo kaliya Apple Watch lagu iibin jiray, laakiin waxaa la xiri doonaa 13-ka Maajo.
Apple waxay ku kordhin kartaa barnaamijyadaada soo degsashada ilaa 800%, haddii aad doorato
Barnaamijyada ay soo xushay Apple si ay uga dhex muuqdaan App Store waxay kordhin karaan soo degsashadaada illaa 800% usbuuc gudihiis
Kuwani waa xogta uu Facebook ka soo ururiyo barnaamijyada iyo websaydhada dhinac saddexaad
Kooxda Mark Zuckerberg ayaa daabacday maqaal aad u balaaran oo uu ku sharaxayo waxyaabaha ay soo aruuriso Facebook marka aan la booqan shabakadiisa bulshada iyo sida loogu isticmaalo faa iidada la filayo ee isticmaalaha.
Dhowr xanta ayaa xaqiijineysa in iPhone SE uu imaan doono inta lagu jiro bisha Maajo
Xanta ayaa bilaabeysa inay sii xoogeysato: waxaan heysanaa iPhone SE cusub oo leh astaamo la mid ah iPhone X, Aip chip, iyo isku xira minijacker.
Tim Cook wuxuu ku adkeysanayaa: iPads iyo Macs ma ahan inay isku milmaan
Xilligii PC-ga kadib macnaheedu maahan in Macsku ku qasban yahay inuu ku dhex milmo iPads ama taa beddelkeeda. Tani waa maya ...
Dukaammada Apple ee adduunka ayaa horeba u soo muujiyay caleenta cagaaran ee Maalinta Dunida
Tani waa caado sannadle ka dhacda Apple waana tan toddobaadkan, gaar ahaan Axadda soo socota 22keeda ...
Dhowr sano oo sugitaan ah ka dib, Infuse wuxuu oggolaanayaa is dhexgalka Plex
Infuse 5 ayaa lagu cusbooneysiiyay App Store iyadoo lagu darayo taageerada Plex, oo ah maareeye ka kooban waxyaabo badan oo warbaahin ah oo u oggolaan doona dadka isticmaala inay ku koobaan waxyaabaha ku jira hal codsi.
IOS 12 durba waa la bilaabay in laga arko internetka WWDC
WWDC ayaa soo socota, sidaa darteed waxaan tijaabin doonaa iOS 12 nooca mustaqbalka ee nidaamka qalliinka ee la soo bandhigi doono bisha Luulyo laakiin taas horayba looga arkay internetka.
Apple way diiday inay dayactirto barnaamijka caanka ah ee 'YouTuber's iMac Pro' waana mid sax ah
Fiidiyow uu leeyahay YouTuber oo caan ah ayaa faafay markii uu cambaareeyay in Apple uu diiday inuu dayactiro iMac Pro. Waan falanqeyneynaa.
Fortnite wuxuu ku bilaabmaa mid xoogan, dakhligeeda ayaa cirka isku shareeray ilaa $ 25 milyan bishii
Fortnite wuxuu sii wadaa inuu jebiyo diiwaanada. Waxay kuheesatay guux badan nidaamka liiska sugitaankeeda, hadana waxay ku guuleysatay inay gaarto $ 25 milyan oo dakhli bishii ugu horeysay.
Movistar wuxuu cusbooneysiiyaa codsigiisa wuxuuna si buuxda u dhexgeliyaa Aqoonsiga Face
Hadda waa, ku dhowaad lix bilood ka dib, markii Movistar uu go'aansaday inuu si buuxda ugu dhex daro Aqoonsiga Face-ka ee arjiga oo wuxuu ku yimaadaa qaab cusbooneysiin ah.
Diyaaradda AirPort Express ayaa markale ka baaba'aysa mustaqbalka macruufka beta-kii ugu dambeeyay
Hagaag, waxay umuuqataa goobihii udambeeyay ee iOS 11.4 beta 2 ay ina tusayso, waxay gabi ahaanba baaba'aan dhamaan macluumaadka ku saabsan AirPort Express.
Samsung wax badan ayey iibisaa laakiin Apple waxay heshay dakhli intaa ka sii badan sanadka 2018
Sida ku cad xogtii ugu dambeysay waxaan fahmi karnaa xaqiiqda ah in ilaa hada 2018 Samsung ay iibisay terminaal dheeri ah laakiin Apple ay macaash badan heshay.
Apple wuxuu daahfurayaa Khariidadaha "Hanuuninta Lane" ee Hungary, Ireland, iyo Wadamo Badan
Hawsha si sax ah loogu hago dariiqyada jidadka iyo jidadka waaweyn ee Khariidadaha lagu daray iOS 11 waa la ballaariyay waxaana hadda laga helayaa dalal badan: Hungary, Ireland, Czech Republic, Poland iyo Finland.
Ruushka ayaa weydiistay Apple inay ka saarto barnaamijka Telegram barnaamijka App Store
Dowladda Ruushka ayaa ka codsatay Apple inay ka saarto barnaamijka Telegram-ka keydka App-ka Ruushka, ka dib markii ay xannibtay in barnaamijkan lagu isticmaalo dalka.
Apple wuxuu diiwaangeliyaa iPhone-ka cusub ee SE laba bilood ka hor WWDC 2018
Diiwaanada cusub ee 'EEC records' waxay tilmaamayaan bilaabitaan dhow oo ah waxa uu noqon karo nooca cusub ee iPhone SE ee imaan kara bisha Maajo ama Juun
IPhone X wuxuu helaa 35% wadarta macaashka adduunka ee taleefanka gacanta
Shirkadda Cupertino waxay ku haysay boqolkiiba toddobaatan macaashka guud ee ka soo baxa iibka taleefannada gacanta ee guriga lagu hayo.
Bloomberg Ayaa Sheegtay In Apple Ay Bilaabi Doonto Adeegga Diiwaangelinta Isku-Darka Warka
Isbaanishka iyo dalal kale oo badan wali wax war ah kama hayno codsiga News, barnaamijka Apple ee bixiya ...
Spotify waxay si buuxda u cusbooneysiin doontaa codsigeeda iyadoo lagu darayo xakamaynta codka
Shirkadda Iswidishka ah ee Spotify ayaa soo bandhigi karta usbuuca soo socda, munaasabadda loo qorsheeyay 24-ka Abriil, cusboonaysiinta dhammaystiran ee codsigeeda aaladaha mobilada ee isku-dhafka kaaliyaha codka.
Amazon waxay ka sarreysaa Apple marka laga hadlayo otomaatiga guriga
Dagaalkii HomeKit wuu sii socdaa, suuq badan ayaa ka jira aagag kale, suuq si cad ugu badan Amazon iyo wax soo saarkiisa Echo.
Samsung sidoo kale waxay lahaan doontaa qalab leh darajo
Markii ay u muuqatay in markii ugu horreysay muddo dheer Samsung aysan raaci doonin raad aan caqli gal ahayn oo Apple ah, waxay sharciyeysay qalab leh darajo.
Bisha May Samsung waxay bilaabi doontaa soo saarista shaashadda wixii soo socda iPhone X iyo X Plus
Mabda 'ahaan, bisha Maajo ee soo socota ayaa loo tixgelin doonaa bilawga wax soo saarka Samsung Display, ...
Apple ayaa ku dhow inay joojiso duulimaadyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dul mara Apple Park
Apple waxay ugu dambayntii awoodi doontaa inay joojiso duulimaadyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dul mara Apple Park, duulimaadyada ay shirkaddu aragti ahaan xaddidi karin maxaa yeelay ma jiro hawad xaddidan.
Apple waxay tijaabineysaa maareeyaha qalabka ganacsiga
Maamulaha cusub ee ganacsiga Apple wuxuu u oggolaan doonaa waaxaha IT-ga inay maareeyaan oo ay xakameeyaan aaladaha kala duwan ee shirkadda ee Apple.
IOS 11.4 Beta 2 hadda waa la heli karaa iyada oo ay weheliso watchOS 4.3.1 Beta 2 iyo tvOS 11.4 Beta 2
Apple waxay soo saartay noocii labaad ee tijaabada ah ee noocyadeeda cusub ee iOS, tvOS iyo watchOS ee soosaarayaasha, laba toddobaad ka dib noocii ugu horreeyay.
Apple wuu ka takhalusaa, xilligan, canshuuraha cusub ee uu soo rogay Trump
Donald Trump wuxuu ku soo rogay canshuuro taxane ah qaybaha Shiinaha laga keeno. Apple ayaa laga yaabaa inay u dabaaldegto maaddaama qayb ka mid ah waxyaabaha laga keeno aysan ku jirin liiskan.
Intii lagu guda jiray 2017 ilaa 29 ka mid ah shaqaalaha Apple ayaa shaqada laga eryay kadib markii ay u siidaayeen xogta shaandhada, qaarkood xitaa si toos ah ayaa loo xiray
Beta-ka watchOS 4.3.1 wuxuu siinayaa aragti yar oo ah waxa Apple damacsan tahay mustaqbalka watchOS 5. Xaaladdan oo kale, tufaaxa weyn wuxuu u oggolaan karaa horumariyeyaasha inay u sameeyaan taleefannada Apple Watch iyagoo adeegsanaya xirmo cusub oo horumarineed.
Apple waxay sii deyn kartaa iPhone X oo dahab ah maaddaama daadinta FCC ay muujineyso dahab midab leh iPhone X iyo in badan oo ka mid ah astaamaheeda waxay la mid yihiin heerarka hadda jira.
Macaamiisha ayaa qadarinaya CarPlay iyo Android Auto markay baabuur iibsanayaan
Daraasad lagu sameeyay macaamiisha Mareykanka ayaa xaqiijinaysa inay rumeysan yihiin inay muhiim tahay in la helo nidaam infotainment ah sida CarPlay ama Android Auto marka la iibsanaayo gaari cusub.
Waa maxay GrayKey maxayse u beddeshay sharci fulinta Mareykanka?
Bilowga-Grayshift, wuxuu kacaawinayaa adduunka amniga Mareykanka kadib abuuritaan qarsoodi ah ...
Ugu dambeyntii Telegram waxaa lagu xanibay Ruushka
Go'aanka si deg deg ah looga xayirayo arjiga Telegram ee Ruushka horey ayaa loo gaadhay waxayna ugu dambeyn hor istaageen codsigii. Kadib…
Tufaaxu wuxuu ka hortagi doonaa astaamaha alwaaxda HomePod isagoo adeegsanaya qalab kale
Shirkadda Cupertino waxay dooneysaa inay iska ilaaliso inay baabi'iso alaabta gurigaaga ka sameysan oo alwaax ah sababo la xiriira HomePod, taasna waxay ugu adeegsan doontaa qalab kale dhismaheeda.
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha iyo qaar ka mid ah warbaahinta khaaska ah, Home Pod wuxuu ku urursan yahay khaanadaha, lama iibinayo.
watchOS 5 wuxuu ku dhow yahay koonaha Apple ayaa ka digaysa. Munaasabaddan, beta-ka ee watchOS 4.3.1 waxaa lagu dhawaaqay in barnaamijyadaas aan la cusbooneysiinin aysan mar dambe la jaan qaadi doonin noocyada mustaqbalka.
Spotify iyo Hulu waxay ku biiraan xoogagga si ay u bixiyaan adeeg isku dhafan
Tani waa sida Hulu iyo Spotify ay u socdaan laga bilaabo maanta si ay ugu fidiyaan dalka Mareykanka adeeg mideysan oo fiidiyoow ah dalab iyo muusig dalab qiimo jaban.
Qaar ka mid ah iPhone X iyo iPhone 8 ayaa lumiya dareeraha iftiinka jawiga markay beddelayaan shaashadaha
Qaar ka mid ah boosteejooyinka iPhone X iyo iPhone 8 ee lagu hagaajiyay kumbuyuutarrada aan rasmiga ahayn waxay bilaabeen inay lumiyaan dareeraha iftiinka iftiinka oo muhiim u ah aalad sidan oo kale ah.
Tani waa waxa IPhone X Product (RED) u egtahay inaadan haysan karin
Qiyaaska iyo farshaxannimada wanaagsan ee leh barnaamijyada wax-ka-beddelka ayaa noo oggolaanaya inaan ku raaxeysano aragtiyada ay bixiso iPhone X ee midabkeedu gabi ahaanba yahay ... ma ka heshay?
Mark Zuckerberg wuxuu ka jawaabayaa hadalada Tim Cook ee ku saabsan khilaafka arimaha gaarka ah
Fadeexada Cambridge Analytica ayaa ku kaliftay Tim Cook inuu sameeyo hadalo dhowr ah, kuwaas oo uu beeniyay madaxa Facebook ee hada Mark Zuckerberg.
Ikea wuxuu soo bandhigayaa noocyo cusub oo kuwa ku hadla yar
Haatan Ikea wuxuu doonayaa inuu ku biiro moodada codka bilaa xadka wuxuuna soo bandhigayaa xariiq ku hadla kuwa aad u soo jiidasho yar.
Apple kaliya waxay isticmaashaa tamarta dib loo cusboonaysiin karo dhamaan tas-hiilaadkeeda
Ragga ka socda Cupertino waxay ku xaqiijiyeen warbixintoodii ugu dambeysay ee deegaanka in 100% tamarta ay isticmaalaan ay gabi ahaanba nadiif tahay.
Heer cusub oo websaydh ah ayaa kuu oggolaanaya inaad ku gasho Face ID ama Touch ID
Qarsoodiga boggaga iyo amniga isticmaalayaasha markii aan iska diiwaangelinno ayaa sii socda ...
Soo dejiso waraaqaha sawirada ee gaarka ah ee iPhone 8 (PRODUCT) RED
Soo qaado waraaqda cusub ee khaaska u ah iPhone 8 (PRODUCT) RED ee Apple ay bilawday iyadoo kaashanaysa RED, oo ah ururka ladagaalanka HIV.
Steve Wozniak wuxuu xirayaa akoonkiisa Facebook kadib fadeexadii Cambridge Analytica
Steve Wozniak, oo ah aasaasaha Apple ayaa sheegay in la joogo waqtigii la xiri lahaa akoonkiisa barta bulshada ee Facebook.
Muxuu Apple u doortey wajiga hore ee madow ee IPhone 8 Product (RED)?
Xaqiiqdii Apple way dhageysatay shacabkeeda waxayna soo saartay iPhone 8 Product (RED) oo leh weji madow, maxaa talaabadan lama filaanka ah?
Apple waxay ujeedkeedu yahay saddexda muraayadaha ee kamaradda dambe ee iphone-keeda
Huawei wuxuu la yaabay qof walba oo leh terminaalka ugu awoodda badan oo leh seddex lens oo gadaal ah, sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha Apple waxay ku shaqeyn kartaa si isku mid ah.
IOS 11.3 waxay hagaajineysaa amniga foomka Safari oo aan dhameystirneyn
Nooca la sii daayay usbuuc ka hor ee iOS 11.3 wuxuu si isdaba joog ah u hagaajinayaa amniga Safari ee ku saabsan buuxinta foomamka, marka lagu daro macluumaadka ku saabsan shahaadooyinka websaydhada aan marinno.
Apple waxay ku dareysaa farriimo digniin cusub oo ku saabsan dhibaatooyinka batteriga
Noocan rasmiga ah ee rasmiga ah ee nidaamka, iOS 11.3, waxaa ku jira farriimo cusub oo digniin ah oo looga digayo isticmaalaha caafimaadka batterigooda.
Apple waxay ku dacweysay teknolojiyad cabbiraysa garaaca wadnaha Apple Watch
Markaad tahay shirkad le'eg Apple, iyo wixii ka sarreeya, markaad tahay shirkad tagta ...
Fikraddaani waxay muujineysaa macruufka ugu yar iyo dib-u-habeynta iOS 12
Fikradan macruufka ah ee iOS 12 waxay muujineysaa nidaam minimalist ah oo ogeysiisyada ay ku sii soconayaan shaashadda qufulka iyo barnaamijyada qaarkood sida xusuusinta iyo xiriirka Siri ayaa dib loo habeeyay, marka lagu daro in lagu daro kooxda FaceTime.
Twitter ayaa ka saari doonta qayb ka mid ah API-keeda waxayna macaamiisha dhinac saddexaad ah hubin doontaa
Shabakada bulshada ee Twitter ayaa ku dhawaaqday isbeddelada API-keeda, xirmooyinka horumarinta ee ay isticmaalaan macaamiisha aan rasmiga aheyn si ay ugu qaabeeyaan barnaamijyadooda. Tani waxay macnaheedu noqon kartaa xiritaanka barnaamijyadan badankood.
Ragga ka socda Cupertino waxay joojiyeen saxiixa macruufka 11.2.6, sidaa darteed, ikhtiyaarka kaliya ee dib loo soo celinayo iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada waa in la rakibo iOS 11.3
On 24-ka Abriil Spotify wuxuu ku dhawaaqi doonaa wax New York. Hadle? Barnaamijka loogu talagalay Apple Watch? Qiimeynta IPO-ga iyo waxa soo socda?
Apple wuxuu sii daayaa Casharro Video cusub ah oo ku saabsan qalinka Apple iyo iPad 2018
IPad 2018 wuxuu la jaan qaadayaa qoraalka tufaaxa weyn, qalinka Apple, kaas oo horseeday in la bilaabo casharro fiidiyoow ah oo muujinaya is-dhexgalka labada qalab.
Maxay batteriga u badan tahay? IOS 11.3 waxay garaacdaa aaladaha sida iPhone 7 ama 6s
Wax walba waxay tilmaamayaan dambiilaha sida iOS 11.3, oo ah nooc ka fog hagaajinta ismaamulka aaladihii hore, dhagxaanta ayaa ku dhowaad aan kala sooc lahayn.
Kuwani waa hay'adaha amaahda cusub ee yimaada Apple Pay ee Yurub iyo Mareykanka
Shirkadda Cupertino waxay sii wadaa inay kordhiso ballanqaadkeeda Apple Pay, sidaas darteed ku darista cusub ee nidaamka lacag bixinta mobilada ayaa looga dhawaaqay America iyo Yurub labadaba.
Tani waa sida ay Apple noo tusayso dukaanka cusub ee Japan, Dukaanka Shinjuku
Sabtida soo socota isticmaaleyaasha Apple ee deggan Japan iyo gaar ahaan aagga Shinjuku,…
Kuwa ay saameysay dacwadda Facebook ee Cambridge Analytica, waxay gaarayaan 87 milyan
Shirkadda lafteeda ayaa mas'uul ka ahayd inay aqoonsato kiiskii ugu cuslaa ee ay kala kulmaan ...
Ka samee caddeynta dalabka Hay'adda Canshuuraha taleefankaaga iPhone-ka
Haddii ay tahay inaad xereyso xisaab celinta dakhliga, waa wakhti fiican inaad shaqada hoos ugu dhacdo oo aad ka faa'iideysato awooda taleefankaaga casriga ah.
Pokémon GO wuxuu soo bandhigayaa dhacdo gaar ah Maalinta Dunida
Maalinta Dunida waa Abriil 22 oo loo dabaaldego Niantic waxay diyaarisay dhacdo gaar ah Pokémon GO iyadoo lala kaashanayo NGO-yada sida Mission Blue iyo PlayMob.
Facebook wuxuu bilaabay qalab looga hortagayo wararka been abuurka ah
Wararka been abuurka ah waxay ku dhexjiraan baraha bulshada. Taasi waa sababta Facebook ay u go'aansatay inay soo bandhigto qalab looga hortago faafitaanka waxyaabaha noocaan ah.
Apple waxay siisaa xargaha iyo kaararka shaqaalaheeda si aad ugu habboon
Saddexda bilood ee ugu horeysa shaqaalaha Apple ee ugu awooda badan waxay helayaan jajabyo iyo kaararka hadiyadaha, hab lagu dhiirigaliyo isboortiga shirkadda.
Apple waxay ku dhawaaqeysaa natiijooyinka maaliyadeed ee Q2 bisha Maajo 1
1-da Maajo waa taariikhda ay Apple u dooratay inay qabato shir jaraa'id halkaas oo lagu soo bandhigi doono xogta ugu habboon ee rubuc maaliyadeedkan, Q2 2018, oo dhammaatay.
Kuwani waa cayayaanka iyo saxitaanka ee ku jira iOS 11.4 beta 1
IOS 11.3 waxay la timid qaladaad badan si loo xaliyo sidoo kale, uma muuqdaan inay wax badan ku lumeen iOS 11.4, waxaan sameyn doonaa safar yar oo ah dhibaatooyinka ugu waaweyn.
IOS 11.4 waxaan horeyba uga helnay tixraacyo shaqooyinka Stereo ee HomePod
Shaqadeeda 'Stereo' taas oo aragti ahaan noo oggolaaneysa inaan ka faa'iideysano dhowr HomePods oo isku meel ah qaab habeysan oo horeyba uga muuqday iOS 11.4.
Apple waxay qorsheyneysaa inay jarto xiriirkii ay la laheyd Intel isla markaana ay soo saarto Chips u gaar ah oo loogu talagalay Macs
Kalamata. Tani waa sida ay cinwaan uga dhigeen khadka istiraatiijiyadeed ee cusub ee Apple. Khadkan istaraatiijiga ah wuxuu ka kooban yahay kala goynta xiriirka Intel iyo naqshadeynta jumladaha Mac-yada Apple-ka Weyn xambaari doonaan.
Iyada oo la heli karo macruufka 11.3, Fiidiyowyada Muusikada ayaa ku soo socda Apple Music
Apple waxay soo saartay macruufka 11.3 oo ay la socoto iTunes 12.7.4. Noocyadan cusub fiidiyowyada muusikada ee Apple Music ayaa lagu daray, iyada oo aan wax kharash ah iyo xayeysiis loogu talagalin kuwa ka mid ah kuwa ka diiwaangashan barxadda.
Apple wuxuu sii daayaa Beta Koowaad ee iOS 11.4 ee loogu talagalay Soo-saareyaasha
Apple ayaa hadda sii deysay macruufka 11.4 Beta 1, ee loogu talagalay horumariyeyaasha kaliya xilligan, dhowr maalmood ka dib markii ay sii daayeen macruufka 11.3 dhammaan isticmaaleyaasha.
Hadda waxaad ka ciyaari kartaa Fortnite-gaaga iPhone iyo iPad adigoon casuumaad ka helin
Waxay ahayd mid ka mid ah sii deynta ugu caansan sanadka. Ciyaarta oo nadiifinaysay fiidiyoowga fiidiyowga muddo dheer markii ugu dambeysay ...
Guga ayaa u imanaya xargaha Apple Watch, kuwani waa midabada cusub
Guga ayaa la yimid daahyo cusub oo ku saabsan xargaha Apple Watch waxaanan kuu keenaynaa macluumaad ku saabsan dhammaan wararka.
Apple wuxuu kordhiyaa midabka midabka 10,5-inch iPad Pro kiisaska
Shirkadda Cupertino waxay soo bandhigaysaa laba Smart Smart iyo laba kale oo maqaar gacmeed cusub. Laba nooc oo kiisaska iPad ah oo hela afar midab oo cusub wadar ahaan,
Apple waxay hada ka bilawday arjiga telefishanka mexico, si ay isugu keento hal codsi oo dhan dhamaan adeegyada galka ee aad kuheyso qalabkaaga.
Wararkii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in Apple ay la qabsan karto nashqad sameynta iPhone X si caan ah oo loo yaqaan PRODUCT (RED), oo ah mashruuc faa'iidooyinkiisu gebi ahaanba la dagaallamayaan HIV / AIDS.
Dhowr shati oo Apple ah ayaa la helay oo tixraacaya tiknoolajiyada cusub: baytariyada jilicsan ee iPhone-ka iyo awood u leh inay muujiyaan saamaynta 3D shaashadeeda
IPad 2018 waxaa ku jira 10GHz A2,2 chip iyo 2GB RAM
Natiijooyinka ugu dambeeya ee iPad 2018 waxay soo jeedinayaan in qalabkoodu aad ugu eg yahay kan iPhone 7 Plus, laakiin wuu ka dhaqso badan yahay kana awood badan yahay xitaa RAM yar.
Apple ayaa noo oggolaan doonta inaan ogaanno xogta ay hayaan dukaankeennu, wax ka beddelayno oo tirtirno
Apple waxay diyaarisaa degel aan ku ogaan karno dhammaan xogtayada keydsan, wax ka beddeli karno ama xitaa gebi ahaanba ka tirtiri karno
IOS 11.3 waxay muujineysaa faahfaahin ku saabsan wajiga cusub ee saacadda Gay Pride ee loogu talagalay Apple Watch
Nooca iOS 11.3 ee horeyba loogu heli jiray iPad-ka 2018 wuxuu u adeegay inuu ogaado in Apple uu ka shaqeyn karo qaabeynta aag cusub oo loogu talagalay Apple Watch oo la xiriirta Gay Pride 2018.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.3 iyo cusbooneysiinta inteeda kale, oo ay ku jiraan mid loogu talagalay HomePod
Apple ayaa ugu dambeyntii sii deysay macruufka 11.3 dhammaan iphone-yada iyo iPad-yada la taageero, oo lagu daray cusbooneysiinta Apple TV, Apple Watch, Mac, iyo HomePod.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.3, laakiin kaliya iPad-ka cusub
Toddobaadyo tijaabo ah ka dib Apple waxay sii deysay macruufka 11.3 laakiin kaliya loogu talagalay iPad-ka cusub ee 2018 ee aan weli laga iibsan karin dukaamada.
Twitterrific 5 wuxuu ku darayaa awooda aad fiidiyoow kaga soo shuban karto barnaamijkaaga
Cusbooneysiinta cusub ee 'Twitterrific 5' waxaa ku jira astaamo cusub oo waaweyn oo aan laga heli karin qaybtii hore, sida awoodda isku-xidhka fiidiyowyada iyo agabka qalabixinta isticmaalaha ee adag.
Sannadkan waxaan haynaa mid ka mid ah sharadyadii ugu adkaa ee abid Apple u sameeyo waaxda waxbarashada, tusaale waxaa ah in shirkadda Cupertino ay ardayda u ballan qaaday 200 GB oo ah kaydinta iCloud.
Crayon waa qalinka Apple ee Logitech ku soo bandhigo ku dhowaad kala bar qiimaha
Logitech waxay ku soo bandhigtay iPad qiyaastii € 50 stylus ah oo loo yaqaan Crayon waxayna taasi noqoneysaa fursada ugu horeysa ee dhanka waxbarashada.
Dugsiga Sare ee Lane Tech wuxuu isu diyaariyaa dhacdada Apple
Anaguna waxaan dhowr saacadood uun naga xignaa bilowga dhacdada Apple ee Dugsiga Sare ee Lane Tech, laga bilaabo ...
Apple wuxuu ku ballanqaaday marin u helid wuxuuna naqshadeeyaa emojis cusub
Unicode waxay ka heshay codsi Apple inay ku darto 13 emojis cusub nidaamyadeeda iyadoo mawduuca la xiriira marin u helida iyo naafonimada.
Apple waxay ku dhiirrigelisaa Apple Pay Cash iyadoo ogeysiiskan cusub
Ogeysiis cusub oo ka soo baxay Apple wuxuu ina tusayaa sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee wax loo bixiyo iyadoo la adeegsanayo Apple Pay Cash, oo ah nidaamka lacag bixinta farriinta.
PUBG Mobiladu waxay sababtaa dareen iyo mudnaanteeda
PUBG ee aaladaha mobilada hadda waa la heli karaa waana badal aad u fiican (ama kudar) kan Fortnite, kana sarreeyaa xaqiiqda iyo ciyaarta.
IPad-ka cusub ee 2018 ayaa la jaan qaadi kara qalinka Apple
Xanta ayaa sheegeysa in Apple ay bilaabi karto iPad 2018 kaas oo ku habboon qalinka Apple dhacdada xigta ee Maarso 27
Apple Watch iyo adeegyadu waxay dhaafi doonaan iPhone-ka oo ah mashiinka ugu weyn ee koritaanka shanta sano ee soo socota
Isbedelada suuqyada ayaa u muuqda kuwo is badalaya waqti ka dib waxaana falanqeeyayaasha ugu khibrada badan ay waxbadan ka ogyihiin tan ...
Booliska Mareykanka waxay u isticmaali karaan meydkaaga inuu furo iPhone-ka
Intii lagu gudajiray maalmo kadib soo bandhigida Aqoonsiga Taabashada, oo gacanta kula jira iPhone 5s, qaar badan ayaa ahaa dadka ...
Kuwani waa 25-ka hay'adood ee cusub ee amaahda ee yimaada Apple Pay ee Spain iyo Mareykanka
Apple Pay waxay si xaqiiqo ah u gaadhay tiro yar oo ka mid ah hay'adaha amaahda ee cusub Spain iyo dalal kaleba, waxaan kuu soo qaadaneynaa ururinta dadka cusub ee yimid nidaamka lacag bixinta Apple.
Daraasadu waxay xaqiijineysaa saxnaanta qalabka garaaca garaaca wadnaha ee Apple Watch
Apple Watch waxay kuu ogolaaneysaa inaad qaadatid garaaca wadnaha qofka maalintii oo dhan. Daraasadii ugu dambeysay ee la soo bandhigay waxay hubineysaa in 97% waqtiga, saacadda Apple ay awood u leedahay inay ogaato laxanka wadnaha aan caadiga ahayn.
Ku hagaaji wax soo saarka mashaariicdaada cusbooneysiinta Trello
Trello waa aalad maarayn mashruuc ah oo aan ku abuuri karno qulqulka shaqada isla markaana diirada saari karno tamarta koox shaqo si ay u fuliyaan mashruuc.
Apple waxyar ayey ka beddeleysaa habka horumariyayaashu u soo tebiyaan wararka
Apple waxay bedeshay sharciyada ku saabsan qoraalada sii deynta waxoogaa ah si ay u jaangooyaan nidaamka xoogaa una siiyaan macluumaad wanaagsan macmiilka.
Apple laba sano ayaa ka horeysa marka laga hadlayo aqoonsiga wajiga
Wararkii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in shirkadda Cupertino ay laba sano ka horreyso shirkadaha kale marka ay timaado aqoonsiga wajiga.
Waa maxay iPhone dayac tiray iyo maxaan ugu kalsoonahay
Waxaan dooneynaa inaan iska tuurno khuraafaadka ku saabsan iPhone-ka dib loo hagaajiyay, oo waxaan kuu sheegi doonaa sababta aadan u diidin mid ka mid ah kuwaas.
Kani waa nidaamka furitaanka xiisaha leh ee kamaradda Galaxy S9 +
iFixit wuxuu ina tusayaa sida furitaanka isbeddelka ee ka dhigay shaqooyin caan ah.
Apple waxay ku casuuntay koox xul ah oo horumarineed aqoon isweydaarsi ka dhacaya Paris
Saldhigga Apple Store Station F ee Paris waa dukaan ay u dooratay Apple inay fuliso aqoon isweydaarsi gaar ah oo ay la socoto tiro yar oo horumariyayaal ah Maarso 23.
Ku ciyaarista Fortnite ee leh iPhone X
Fortnite hadda waxaa loo heli karaa macruufka iyo iPhone News waxaan awoodnay inaan tijaabinno. Waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyow sida ay ugu shaqeyso iPhone X
Bakhaarka App-ka ayaan hadda laga heli karin Iran
Kuwii ku sugnaa Cupertino waxay xireen marinka dukaankooda arjiyada, App Store, ee Iran. Warku wuxuu la xiriiri karaa sharciga dowladda hadda jirta ee Mareykanka.
Fortnite for iOS hadda waa la heli karaa, waxaan ku tusineynaa sida loo helo casuumaad lagu ciyaaro
Ragga ka socda Epic Games waxay bilaabeen Fortnite for iOS, haa, waa inaan sugno saf saf ah oo aan ku ciyaarno. Waxaan kuu sheegeynaa sida loo bilaabo u ciyaarista Fortnite ee iOS.
Beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 11.3 ma bixiyo horumarin dhab ah, kuwani waa cayayaanka cusub
Waxaan sameyn doonaa dib u eegis yar oo ku saabsan waxa ay yihiin qaladaadka cusub iyo kuwa go'an ee ku jira beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 11.3.
Google waxay ku yiraahdaan Android waa aamin sida iOS, ama xitaa ka badan
Google way cadahay, hada Android waa aamin sida iOS, ama xitaa wuu ka amaan badnaan karaa midka toos ula tartamaya.
Xanta macquulka ah ee ah in Galaxy S10 uu yeelan doono aqoonsi Face ah
Falanqeeyayaasha ayaa durbaba fiirinaya sanadka soo socda waxayna soo jeedinayaan in Galaxy S10 ee soo socota ay lahaan karto aqoonsi Face ah oo la mid ah kan Apple.
WhatsApp ma la wadaagi doonto macluumaadkaaga Facebook, hadda ...
Ragga ka socda Facebook waxay ballanqaadayaan in WhatsApp aysan la wadaagi doonin xogta iyaga illaa ay ka buuxinayaan shuruudaha qawaaniinta Yurub.
France v. Apple iyo Google dhaqankooda ganacsi ee xadgudubka ah
Dowladda Faransiiska ayaa ku bartilmaameedsatay Apple iyo Google labadaba dhaqankooda ganacsi ee xadgudubka ah iyadoo ka faa'iideysaneysa horumariyayaashu inay si gooni gooni ah u dejiyaan qiimaha isla markaana u beddelaan xaaladaha.
Iibinta iPhone-ka "dib loo cusbooneysiiyay" way sii kordheysaa waxayna saameyn ku yeelaneysaa boosteejooyinka Android
Tani waa sida suuqa loogu talagalay dib-u-hagaajinta boosteejooyinka iPhone-ka loo kobciyey in ka badan abid, taas oo ka dhigaysa qalabkan kuwo soo jiidasho leh kuwa aan horay u tixgelin.
Appcast-ka caanka ah ee Podcast-ka ayaa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo hawl cusub oo xiiso leh oo soo koobeysa podcadka aan dhageysaneyno.
Saldhigga ku-dallaca wireless-ka Apple ee Qi-raacsan, AirPower, wuxuu diyaar u noqon karaa ganacsi dabayaaqada bishaan.
WWDC Juun 4-8 iyo Muhiim Isniinta 4
Apple wuxuu ku dhawaaqay WWDC, Shirka Apple Worldwide Conference. Waxay ka dhici doontaa San Jose, Kaliforniya, Xarunta Shirarka McEnery (isla xaruntaas shirar ee sanadkii hore) laga bilaabo Isniinta, Juun 4, illaa Jimcaha, Juun 8, 2018. Khudbadda bilowga ah waxaa la filayaa Isniinta, Juun 4.
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa barnaamijka MFi ee USB-C ilaa 3,5mm Jack adapters
Apple waxay bedeshay siyaasadii shahaadeynta MFi ee hillaaca ama adapters-ka USB-C ilaa 3,5mm Jack.
Apple waxay ku dhawaaqeysaa Iibsiga Qalabka, Adeegga Diiwaangelinta Dijital Dijital ah
Maalmahan waxaa soo badanayay dadka meel iska dhiga warqadaha, joornaalada ama joornaalada si ...
Apple waxay soo bandhigi doontaa 13-inji cusub oo MacBook ah waxayna cusbooneysiin doontaa baaxadda iPad-ka
Macluumaadka iyo xanta ayaa si aad ah uga dhawaajinaya in Apple ay soo saari doonto MacBook cusub oo 13-inch ah ayna cusbooneysiineyso baaxadda iPad.
Khariidadaha Apple hadda waxaa ku jira xogta wadaagga baaskiil ee ku dhowaad 200 magaalo
Hadda shirkadda Cupertino waxay ku dartay xogta wadaagga baaskiillada ku dhowaad laba boqol oo magaalo oo adduunka ah.
Sugiddu way sii socotaa: Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.3 Beta 5
Apple wuxuu soo bandhigayaa Beta shanaad ee iOS 11.3 markii inteena badani horey u fileynay nooca ugu dambeeya ee dhammaan isticmaaleyaasha, sidaas darteed sugitaanku wuu sii socdaa.
WhatsApp wuxuu kordhiyaa waqtiga intaad tirtiri karto fariimaha
Apple wuxuu kordhiyaa waqtiga aan tirtiri karno wixii aan dirnay. Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo sameeyo oo markaa looga fogaado dhibaatooyinka farriimaha khaldan awgood.
AirPods wali waa shey la doonayo, oo ka duwan iPhone X
Xogta ay soo aruurisay Barclays waxay muujineysaa in AirPods ay hadda yihiin badeecada loogu jecel yahay shirkadda Cupertino, oo aad uga soo horjeedda waxa dhacaya, tusaale ahaan, iPhone X.
Apple waxay mar labaad soosaaraysaa astaanta MFi si ay ulaqabsato waqtiyada hadda socda
Calaamadda loo sameeyay iPhone ayaa dib loo cusbooneysiiyay, in kasta oo taabasho yar oo fudfudud, wax lagu garto Apple sannadihii la soo dhaafay.
Aasaasaha Siri ayaa sheegay in Apple ay bedeshay qaabka kaaliyaha
Aasaasaha Siri wuxuu wareysigiisa ku sheegay in Apple ay isku dayeyso inay kaaliyeheeda farsamada u rogto qalab kaamil ah, wax aad u adag.
Google waxay ku dhiirrigelisaa Maalinta Mario maalinta 10-ka Maarso Khariidadaha Google
Ragga ka socda Google waxay isu diyaarinayaan inay u dabaaldegaan Maalinta Mario iyagoo noqonaya hal dabeecad kale oo caan ah Mario Kart iyada oo loo marayo Khariidadaha Google.
Jurassic World Alive, ciyaarta fiidiyowga cusub ee leh 'Augmented Reality', ayaa soo socota
Jurassic World Alive, oo qaadan doonta furayaasha guusha horey loogu arkay Pokémon Go, taas oo ah, Xaqiijinta Awoodda.
Kaliya 10% ka mid ah waxyaabaha laga daawado Netflix ayaa loo maraa iPhone-ka
Sida laga soo xigtay daraasadihii ugu dambeeyay, 10% isticmaalka adduunka ee Netflix waxaa lagu sameeyaa iPhone.
Axl Rose wuxuu isbarbar dhigayaa Tim Cook iyo Donald Trump oo wuxuu abuuraa muran
Xubinka caanka ah ee Guns N 'Roses wuxuu doortay inuu isbarbar dhigo maamulaha Apple Tim Cook iyo Donald Trump laftiisa.
Instagram waxay ku dari kartaa Muuqaalo Sawir aad u dhaqso badan
Habka sawirku wuxuu ku imaan karaa Instagram si dhakhso leh iyada oo ay ugu wacan tahay daahfurnaanta cusub ee beta beta. Habka kuu oggolaanaya inaad ku hesho tallaallo aad u fiican oo leh dhowr tallaabo oo fudud.
Sims Mobile-ka ayaa ka soo muuqday iOS App Store oo natiijooyin wanaagsan laga helay
Farshaxanka elektiroonigga ah wuxuu ku siinayaa daabacaad cusub oo la socota The Sims Mobile, oo ah nooc cusbooneysiiyay Sims-ka oo soo jiidanaya dadweyne aad u tiro badan.
Wakiil Mareykan ah ayaa laga helay Dukaanka Apple isagoo ka faa'iideysanaya kormeer uu ku xaday AirPods.
Khariidadaha Google ayaa ku daraya aragtida Muuqaalka Wadooyinka 11 jardiinooyinka mawduucyada Disney
Ragga ku jira Khariidadaha Google waxay dariiqyada caanka ah ee 'Disney theme parkings' ee Mareykanka ku darsadaan Street View si aan ugu wareegi karno sida aan doonno.
Kuwani waa saxitaanka iyo cilladaha cusub ee ku jira iOS 11.3
Kuwani waa sheekooyinka cusub ee heerarka oo dhan jooga, maxaa yeelay inkasta oo ay Apple saxayso khaladaadka qaarkood, haddana waxaa jira kuwa kale oo muuqda.
IOS 11.3 beta 4 ma hagaajinayo batteriga ama waxqabadka nidaamka
IOS 11.3 beta 4 ma bixiso wax hagaajin waxqabadka batteriga ah ama guud ahaan nidaamka nidaamka qalabka hore.
WatchOS 4 beta 4.3 ee loogu talagalay horumariyeyaasha hadda la heli karo
Apple ayaa hadda sii deysay beta-kii afaraad ee watchOS 4.3 kaas oo ay kujiraan astaamo cusub oo ku saabsan qalab animations ku amraya iyo xakamaynta muusikada agagaarka iphone.
Microsoft waxay sharad ku geli doontaa Cortana ee Muuqaalka macruufka
Microsoft waxay umuuqataa inay rabto inay siiso Cortana, kaaliyeheeda macmiilka ah, riix cusub iyadoo si buuxda loogu dhex darayo barnaamijkeeda Muuqaalka ee iOS.
IOS 11.3 beta 4 code wuxuu soo jeedinayaa in barnaamijka TV-ga uu dhawaan imaan karo Brazil
Nooca ugu dambeeya ee iOS 11.3, markuu suuqa gaadho, wuxuu war u keeni karaa isticmaaleyaasha reer Brazil, maaddaama ay awood u yeelan doonaan inay adeegsadaan barnaamijka TV-ga, oo ah codsi aan ku tashan karno barnaamijka iyo nuxurka adeegyada geeyo qandaraasyada kala duwan. .
Apple wuxuu ku celiyaa magaca asalka ah ee iBooks beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 11.3
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee beta-kii afraad ee iOS 11.3 waxaa laga helaa magaca arjiga buugaagta, oo mar labaad loo yaqaan iBooks, sida ku jirta nooca hadda ee iOS 11.
Apple waxay dib u saxeexday Sony fulinta barnaamijkeeda fiidiyoowga ah
Saxeexyada cusub ee Apple ee adeeggooda fiidiyowga waxay ka timid Sony waxayna ku saabsan tahay Angélica Guerra
Apple waxay shaqaaleeysaa maamule Paramount si kor loogu qaado majaajillada barnaamijkeeda fiidiyowga
Apple waxay kaliya kireysatay Paramount iyo Fox fulin si ay ula tacaalaan dhammaan soosaarka taxanaha majaajillada ee loogu talagalay adeegga fidinta fiidiyowga cusub ee Apple.
Waze waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo hagaajinta soo koobitaanka marinnada
Ragga ka socda Waze waxay cusbooneysiiyaan mid ka mid ah daalacashada ugu wanaagsan ee loogu talagalay macruufka iyaga oo hagaajinaya shaashadda ETA oo aan ku arki karno soo koobid jidka aan mari doonno.
Fikradan macruufka ah ee iOS 12 waxay muujineysaa sida Apple u qaabeyn karo nidaamkeeda cusub ee howlgalka
Fikrad cusub oo ku saabsan iOS 12 waxay muujineysaa sida aan u yeelan karno dib-u-qaabeyn FaceTime ah, oo aan Siri ku leenahay oo aan u isticmaalno Aqoonsiga Face si loo joojiyo codsiyada, iyo xulashooyin kale oo badan.
Sawirka muuqaalka ee Galaxy S9 ma buuxinayo heerka amniga FaceID
Khubarada caymiska ayaa ka hor imanaya astaamaha waxayna tilmaameen in skaanka Samsung Galaxy S9 uusan gaarin heerarka amniga ee ay dejisay FaceID.
Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 11.2.5
Ragga ka socda Cupertino waxay joojiyeen saxiixa macruufka 11.2.5 iyada oo loo marayo server-kooda, si aan hoos ugu dhigi karno oo keliya iOS 11.2.6
Harry Potter: Howarts Mystery wuxuu muujinayaa ciyaartiisii ​​ugu horreysay
Waxaan halkaan u nimid inaan ka hadalno Harry Potter markan, waana in nooca ay ku shaqeyneyso macruufka ay ka tagtay fiidiyowgii ugu horreeyay ee ciyaarta.
Apple Watch waxay iibisaa laba jibbaar qalabka ay tartamaan
Xogta ay falanqeeyayaashu ka tuurayaan Apple Watch waxay soo jeedinayaan inay u iibinayso sida ugu badan ee tartamada oo dhan la isugu geeyo.
CoolStar wuxuu si rasmi ah u sii daayay qalabkiisa Electra 1.0 si loo xiro qalabka iOS 11. Intaa waxaa dheer, Cydia waa loo oggol yahay in lagu rakibo qalabka.
Apple waa mid ka mid ah soo saarayaasha amnigeenna sida aadka ah u qaata
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha, Apple waxay muujineysaa xog aad u wanaagsan oo ku saabsan arrimaha amniga, oo ah barta inta badan soosaarayaasha Android ay ku liitaan.
WhatsApp wali waxaa ka go'an in heerarkeeda ay caan u yihiin kuwa Instagram, tan darteedna waxay go'aansatay in lagu daro istiikarada cusub.
Falanqeeyayaasha ayaa carabka ku adkeeyay in Apple ay lacag ku waayi doonto nidaamka bedelka batteriga
Uguyaraan, sida ay sheegeen falanqeeyayaashu, dadka isticmaala waxay bilaabayaan inay ka fiirsadaan kordhinta waqtiga qalabkoodu sii dheeraanayo.
Xaqiijintii ugu dambeysay waxay soo jeedineysaa in shirkaddu ay bilaabi karto dacwad loogu talagalay Apple Watch iyo qalabkeeda oo leh fiilo wireless.
Beta-ka seddexaad ee iOS 11.3 wuxuu lumiyaa batteriga aaladaha duugga ah
Falanqeyn dhammaystiran ka dib, beta-kii saddexaad ee iOS 11.3 wuxuu lumiyay batteriga qalabkii hore sida iPhone 6s.
Samsung oo koobiyeynaysa Apple? Shirkadda Kuuriya ayaa si cad u beenisay
Kuwo badan ayaa ku degdega inay Samsung ku eedeeyaan inuu si toos ah u soo minguuriyay Apple-ka Animoji iyo aqoonsiga wajiga, laakiin shirkadda Kuuriya ayaa ku doodaysa inay iyagu leeyihiin khariidad u gaar ah.
Vulkan wuxuu horumarin doonaa waxqabadka sawirada ee iOS iyo macOS
Hadda imaatinka API-ga oo si buuxda uga faa'iideysan lahaa Vulkan, waxaa loo maleynayaa in waxqabadka muuqaallada ee iOS iyo macOS ay si muuqata u horumarin doonaan.
CoolStar waxay tirtirtaa xisaabteeda Twitter sababo la xiriira daadinta xabsiga cusub
Ka dib markii uu siidaayay xabsi uu kula jiray Cydia, CoolStar wuxuu go'aansaday inuu tirtiro akoonkiisa Twitter uuna ku dhawaaqo inuu damacsan yahay inuu u dhaqaaqo nidaamka deegaanka ee Android.
Nooca ugu dambeeya ee macruufka 11.3 wuxuu imaan doonaa dhammaadka toddobaadkan
Soo saaraha qalabka ayaa sheeganaya in nooca ugu dambeeya ee iOS 11.3 la sii deyn doono inta lagu jiro toddobaadkan ugu dambeeya Febraayo.
IPhone X Plus wuxuu lahaan karaa shaashad 6.5-inji ah oo OLED ah wuxuuna arki karaa iftiinka sanadkaan oo dhan. Qaar ka mid ah sawirrada warshad wax soo saar ayaa la daadiyay oo laga yaabo inay ka tirsan yihiin isku-dubarida qalabkan.
Apple waxay ku dhiirrigelisaa wararka Animojis xayeysiis cusub
Animojis waa mid ka mid ah soo jiidashada iPhone X iyo hadda Apple, iyadoo la sii daayo soo socota ee iOS 11.3, waxay kor u qaadeysaa wajiyada cusub ee laga heli karo qalabka iyada oo loo marayo xayeysiin cusub.
Iibinta taleefannada gacanta ayaa adduunka oo dhan hoos uga dhacay markii ugu horreysay tan iyo 2004
Waxay umuuqataa inay tahay wax aan macquul aheyn laakiin waa run, iibinta taleefannada casriga ah ayaa hoos u dhacaya markii ugu horreysay tan iyo sanadka ...
IPhone X miyuu dejiyey isbeddel? Waan ogaan doonnaa inta lagu jiro MWC
IPhone X miyey dejin doontaa isbeddel sannadkan? MWC 2018 ugama tagi doono qol shaki ah wararka xanta ahna durba waa amarkii maalinta.
Xarunta dayactirka ee Apple waxay soo saartaa 20 911 wicitaan maalintii
Xarun dayactir oo Apple ku taal Mareykanka ayaa maalintiiba wacaysa ilaa 20 wicitaan lambarka gurmadka 911.
Horumariyayaashu waxay hadda soo bandhigi karaan illaa 10 shaashadda shaashadda barnaamijyadooda
Apple waxay balaarisay tirada shaashadaha ee ay heli karaan horumariyeyaasha si ay u bixiyaan maadaama codsigoodu yahay, min 5 illaa 10.
IOS 11.3 goobtaada ayaa laguu soo diri doonaa markaad wacayso 112, laakiin Spain laguma soo dirayo
Imaatinka macruufka 11.3 waxaan haynaa warar badan, midkoodna waa in markaan wacno adeegga gurmadka anaga oo garaacna 911 goobtayada ayaa loo diri doonaa.
HomePod wuxuu ku leeyahay soo dhaweyn wanaagsan suuqa afhayeenka caqliga badan
Afhayeenka shirkadda Cupertino wuxuu umuuqdaa inuu ku soo beegmayo warbaahin kala duwan, ma ahan kuwa ugu caqliga badan, laakiin waxay ku haysataa korsasho aad u wanaagsan suuqa
Buugga Fariña waxaa loo arkaa inuu yahay kan ugu iibinta badan iBooks Store ka dib afduubkiisii ​​garsoor
Ka dib afduubkiisii ​​taxaddarka ahaa ka dib cabashadii duqa hore ee O Grove ee buugga Fariña, shaqadu waxay noqotay buugga ugu iibsiga badan dukaanka iBooks.
Markan nalama soo food saareyno diiwaangelin dhinac saddexaad ah oo ku saabsan astaan ​​ama la mid ah wixii ku dhacay sumadda ...
Apple waxay dooneysaa inay ka fogaato dhexdhexaadiyeyaasha iyagoo si toos ah uga iibsan kara cobalt miinooyinka
Apple waxay dooneysaa inay ka fogaato dhibaatooyinka caafimaad ee shaqada iyo kharashka badan iyadoo si toos ah uga soo iibsaneysa alaabta ceyriinka ah miinooyinka, sidaas darteedna looga fogaanayo dhexdhexaadiyeyaasha.
Yahoo mail waxay dhibaato ka haysataa barnaamijka Mail mail-ka
Ma tahay isticmaale Yahoo Mail oo dhibaato ayaa kaa haysata iPhone-kaaga ama iPad-kaaga si aad u maamusho emaylkaaga? Apple iyo Yahoo waxay xaqiijinayaan inay dhibaatooyin ku qabaan emaylka.
Apple waxay diiwaangelinaysaa laba iPad oo cusub oo soo bandhigoodu dhow yahay
Apple waxay diiwaan galisay laba kaniini oo cusub kuwaas oo la bilaabi karo inta lagu jiro bisha Maarso dhacdo aan wali la shaacin
Sidee Apple uga Faa'iideysan karaa ARKit Si Sare loogu qaado Wax soo saarkiisa
Tikniyoolajiyadda 'ARKit' waxay noqon kartaa hantida ay Apple u adeegsan doonto dhaqdhaqaaqyadeeda soo socda si ay ugu soo bandhigto wax soo saarkooda kaydka Apple ee ku saleysan xaqiiqda cusub iyo tan hadda jirta.
Muraayadda Albaabka laga galo Bakhaarka Chicago Apple ayaa dillaacday
Tanina maahan dhibaatada ugu weyn ee bakhaarka weyn ee Apple ku yaalay webiga agtiisa ...
Nike + Run Club waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo caqabado cusub si loogu dhiirrigeliyo inaan sameyno isboorti badan
Wiilasha Nike + Run Club waxay cusbooneysiiyaan barnaamijkooda iOS-ka si aan ugu diyaar garowno howlgalka xagaaga, ku guuleysiga abaalmarino cusub iyo inaan la tartamno bulshada Nike +.
Edy Cue wuxuu noqon doonaa codka Apple ee sanadkan South By Southwest
Miyaad maqashay South By Southwest? Xaqiiqdii haddii aan kuu sheego inay ku saabsan tahay SXSW waxay noqon kartaa ...
Diyaarad Drone ah ayaa ku dhacday Apple Park Apple miyuu soo riday?
Dhacdadii ugu dambeysay ee ku lug lahayd diyaarad Drone ah oo dul mareysa Apple Park ma muujineyso sida ay ugu dhowdahay kooxda amniga Apple inay soo ridaan diyaarad Drone ah oo ku dhacday baalayaasha cadceedda ee Apple Park